I-Backhoe Loader Factory - China Backhoe Loader Manufacturers, abahlinzeki
Izici eziyinhloko zokwakheka nobuchwepheshe obuthuthukisiwe obusetshenziswa kulayishi we-backhoe we-WIK388T
I-WIK 388 Isilayishi se-backhoe sihlanganisa imishini emibili yesikhombi nesilayishi. Inayo yonke imisebenzi yesifaki nesilayishi. Umshini owodwa unemisebenzi eminingi, ilula futhi iyaguquguquka, futhi inciphisa izindleko zokuthenga nokusebenzisa izindleko zomshini wonke. Ngokuzithandela i-Deutz, i-Cummins nezinye izinjini ezidumile nohlelo lokudlulisa lwe-Carraro lwase-Italy. Ingafakwa ngamathuluzi wobunjiniyela asizayo ahlukahlukene njenge-breaker, i-anchor drill yomhlaba, i-vibration rammer, njll. Lo mkhiqizo ...
izici ezisemqoka zesakhiwo nokusetshenziswa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe kulayishi we-WIK30-25 Backhoe
I-WIK Isilayidi se-backhoe sihlanganisa imishini emibili yesikhombi nesilayishi. Inayo yonke imisebenzi yesifaki nesilayishi. Umshini owodwa unemisebenzi eminingi, ilula futhi iyaguquguquka, futhi inciphisa izindleko zokuthenga nokusebenzisa izindleko zomshini wonke. Ngokuzithandela i-Deutz, i-Cummins nezinye izinjini ezidumile nohlelo lokudlulisa lwe-Carraro lwase-Italy. Ingafakwa amathuluzi ahlukahlukene wobunjiniyela asizayo njenge-breaker, i-anchor drill yasemhlabathini, i-vibration rammer, njll. Lo mkhiqizo w ...